Gabar Qiratay Marka Kacsigu Qabto In Ay Miyir Daboolanto!!!! - iftineducation.com
Gabar Qiratay Marka Kacsigu Qabto In Ay Miyir Daboolanto!!!!
aadan21 / February 19, 2016
iftineducation.com – Cadaabka aduunka waxaa ka mid ah dumar oo kacsi badan oo garoob noqotay ama la soo furay, ma og tahay haweenka marka ay kacsi badan yihiin inaysan sabri karin, naagta qooq markuu qabto miyirka ayaa ka tagayo, waxa kale uma muuqado waxan ahayn gus nimeed oo weyn.
Waxay ka dhigan tahay naag oon iyo harraad hayo waqti kulayl ah, oo aan hal maalin biyo habbin, maxaad moodaa marka ay la kulanto biyo baraf ku jiro oo qabow ah waxa ay ku samaynayso, naagaha garoobada haloo kaalmeeyo, gabrob marka laga hadlo waxaa laga waramayaa qibrad, siiba marka ay kacsi u dhalatay. garoobo waxaa jiro iska degan oo laga yaabo inay bishii hal mar galmo u baahadaan.
Laakin waxaad ogaataa inay jiraan kuwo u baahan maalin walba una bahaan nin geed adag leh, marka loo galiyo taah cuslus ka baxo, si daran u macaansato geedka raga, shiirka ursata, runtii naagahan waxay ku nool yihiin yurub, naagaha la soo furay oo hadana ninka jecel, dhalinyaro badan ayaa naagahaas guursaday, marka ay netka ka barteen kaddib, waxaa la sheegay naag lix nin soo furatay da’deeda afartanka dhaaftay.
Nin xer ah inta lagu daray waxay ooga timid waqooyiga America, ninka xirta ahaa marka uu kula aqalgalay Africa naagtii waxay rabtaa waxyaalo uuna ninka wadaadka ah waligii uuna samaynin, guska inay ka jaqdo, maalin maalmaha ka mid ah isagoo fadhiya saalada oo macwis samar ay u xiran tahay.
Xaaskiisa ayaa u timid waxay fariisatay dhulka waxay bilowday inay macwista kor u qaado geedka la soo baxdo, isagoo yaaban wuu iska daayay markay soo bixisay malab yarowga oo afka ay la gashay oo dhuuqid ku bilowday ayuu booday, wuxuu ku yiri iga daa adabdarradan, meesha ayay isku dagaaleen.naagtaas lixda nin waxay u soo fureen waalida kacsiga dartii.
afrikan daba jeclaa daawo meeluu ku dhagan yahay qooq kaliix
DAAWO: ISIS oo qoorta ka goysay 15 jir kadib markii uu dhageystay heesaha reer Galbeedka